10-ka Shaqsi Ee Kubbada Cagta Ugu Soo Jiidashada Badan Ee Laga Raadiyay Shabakad Caan Ah Oo Dhaqan Xumada Baahisa Oo Lama Filaan Ka Soo Baxay. - Gool24.Net
10-ka Shaqsi Ee Kubbada Cagta Ugu Soo Jiidashada Badan Ee Laga Raadiyay Shabakad Caan Ah Oo Dhaqan Xumada Baahisa Oo Lama Filaan Ka Soo Baxay.
May 7, 2020 Mahamoud Batalaale
Ciyaartoyda kubbada cagta ayaa taageerayaal waali ah ku yeeshay kubbada cagta waxayna taas ku kasbadeen lugtooda iyo xirfadooda ciyaareed ee kubbada cagta laakiin waxaa soo baxday arin kale oo layaableh oo ay shaqsiyaad kubbada cagta ahi safka hore ka soo galeen.
Laakiin ciyaartoyda ayaa mararka qaar soo jiidasho waali ah ku sameeya noocyada xayasiisyada ay sameeyaan iyo waliba sawiro soo jiidasho leh oo ay qaarkood feedho qaawan yihiin ama ayna dhawr ku xidhnayn inta badan jidhkooda.
Haddaba shabakada caanka ku ah fawaaxishka ee PornHub ayaa soo saartay xog lama filaan ah kadib markii ay shaaciyeen 10 ka shaqsi ee soo jiidashada badan kubbada cagta waana xog ay ururiyeen sanadkii la soo dhaafay ee 2019 oo hadda dhawr bilood ka soo wareegeen.
Cristiano Ronaldo ayaa noqday xidiga kaalinta kowaad kaga jira shaqsiyaadkii kubbada cagta ee laga dhex raadiyay Pornhub iyada oo xidiga reer Portugal uu marar badan ugu soo baxay isaga oo xidhan nigis kaliya kuwaas oo uu u xayasiiyo shirkado hoos galiska soo saara.
Laakiin Cristiano Ronaldo ma aha xidigaha kaliya ee raadinta dadka ee goobtan safka hore ku jira waxaana kula soo biiray Lionel Messi kaas oo isna tirada labaad ee ugu badan laga raadiyay.
Haddii Ronaldo iyo Messi ay markii horeba safka hore ku galayeen in xirfadooda ciyaareed ay noqotay mid joogto ah in ka ka badan 10 sanadood, waxay markale safka hore ka galeen soo jiidashada dhinaca kale ee nolosha.
Xidiga jidhkiisa taatuuga ku qariyay ee Mouro Icardi ayaa noqday kan saddexaad ee liiskan ku soo baxay iyada oo xidiga reer Argentina uu ku soo baxay liiska ciyaartoyda ugu soo jiidashada badan ee la raadiyay iyaga oo feedho qaawan.
Inkasta oo Icardi uu qabo gabadha dumarka ciyaartoyda ugu caansan ee Wanda Nara oo marar badan jamaahiirta kubbada cagta doodo badan ka soo dhex abuurtay, haddana Icardi ayaa liiskan safka hore ka soo galay.
Xidiga Man United amaahada kaga maqan ee soo dhibtoonayay sanadihii ugu danbeeyay ee Alexis Sanchez ayaan halkan dhibaato ku qabin wuxuuna noqday xidiga afraad ee inta ugu badan soo jiidashadiisa jidh ahaaneed lagu raadsaday.
Da’yarka kooxda PSG iyo xulka qaranka France ee Kylian Mbappe ayaa dhamaystiray shanta shaqsi ee kubbada cagta loogu raadinta badnaa goobta dadka waa wayn ee PornHub isaga oo ku biiray tobanka shaqsi ee loogu raadinta badnaa ee ugu soo jiidashada badan.
Paulo Dybala ayaa noqday xidigii reer Argentina ah ee ku soo baxay liiska lixda ciyaartoy ee liiskan ugu sareeya wuxuuna qayb ka noqday ciyaartoyda ugu soo jiidashada badnaa.
Haddii uu xili ciyaareedkan ku soo dhibtoonayay Real Madrid, Eden Hazard ayaa shaqsiyaadka kubbada cagta ugu soo jiidashada badan ka galay kaalinta todobaad.
Raheem Sterling ayaa noqday xidiga kaliya ee Premier League hadda ka ciyaara ee ku soo baxay liiska 10 ka shaqsi ee kubbada cagta ugu soo jiidashada badan isaga oo qayb ka ah ciyaartoyda inta ugu badan lagu raadiyay erayada dadka waa wayn.
Karin Benzema oo Real Madrid ka tirsan ayaa noqday xidiga kaalinta 9 aad ka galay ciyaartoyda ugu soo jiidashada badan ee inta ugu badan laga raadiyay shabakada dadka waa wayn ee Pornhub.
Laakiin shaqsiga tobanka ugu sareeya dhamaystiray ayaa noqday mid lama filaan ah waana xidig waqti hore kubbada cagta ka fadhiistay kaas oo hadda ah mulkiile kooxeed waana David Beckham kaas oo tiradda 10 aad ee ugu badan laga raadiyay shabakadan.
Beckham ayaa ciyaaraha ka fadhiistay sanadkii 2013 kii laakiin waxa uu wali ka mid yahay dadka saamaynta tooska ah sii leh.